About Us - Jinyun Co. Jewelry, Ltd.
Jinyun Jewelry oo la asaasay 2006. Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa ee Guangzhou, Shiinaha. Waxaan ku takhasusay ahama Steel Daad Jewelry by B2B oo ka badan 10 sano ee ganacsiga ee line this. Ilaa hadda, waxaan la soo wada leh in ka badan 300-qeybiyeyaasha tan iyo markaas iyo inay u leeyihiin habka lacag bixinta ugu haboon, qiimaha iyo adeegyada loogu talagalay macaamiisha our ugu fiican.
Waxaa jira in ka badan 100,000 oo naqshado kala duwan waxaad ka heli kartaa boggayaga internetka, www.julongsteeljewelry.com . All lagu daydo cusub la cusbooneysiin doonaa toddobaadka kasta oo ku saabsan ka badan 2000pcs waxyaabaha cusub. Products loogu kala duwan yihiin kuwo aad u ballaaran oo si buuxda u dhergin karo macaamiisha badan oo kala duwan ka soo baahida dal oo kala duwan '.
Waxaan leenahay in ka badan 10,000 oo xubin ka diiwaan gashan yihiin ka adduunka oo dhan, waxay sida caadiga ah ka dhigi lahaa si joogto ah dib-u-stock oo iyagaan ku soo kicin lahaa dad badan oo ku haboon tan iyo macaamiisheena u baahan tahay oo kaliya oo ku saabsan 3-15 maalmood si ay u helaan alaabtooda. Waxaan ku siin waxyaabaha qiimaha aad u yar yahay iyo habka lacag bixinta deg deg ah oo ku haboon, sida Pay-kumuunayaasha, kala iibsiga Bank, ururka reer galbeedka iyo garaam Money.
Haddii aad xiisaynayso, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriir la.